बालबालिकाले हामीलाई किन टेर्दैनन् ? (Part One) - Yessamachar
बालबालिकाले हामीलाई किन टेर्दैनन् ? (Part One)
एउटा अपार्टमेन्ट छेउमा बगैंचा थियो । बगैंचामा सुन्दर फूल ढकमक्क फुलेका हुन्थे । तर बगैंचामा खेल्न आउने केटाकेटीका कारण फूल लामो समय सम्म बोटमा रहदैन थिए । बोटबाट फूल टिपेर खल्तीमा हालिहाल्थे । कसै कसैले बाटोभरि फूल फालिदिन्थे ।
केटाकेटीहरुलाई फूल टिप्न हुन्न भनेर सबैले सम्झाउन खोज्थे । तर उनीहरु यति बदमास थिए कि कसैलाई टेर्दैन थिए । केही नलागे पछि अपार्टमेन्टमा बस्ने केही मानिसले केटाकेटीहरुलाई थप्पड पनि हाने तर फेरि पनि कोही नभएको मौका छोपेर उनीहरुले फूल टिप्न छोडेनन् ।
यो सबै देखिरहेको एकजना शिक्षकलाई केटाकेटीहरुसंग भेट्न मन लाग्यो । शिक्षकले उनीहरु सबैलाई एकै ठाउँमा भेला गराए र भने:
” तिमीहरुलाई बोटको फूल टिप्न त आउँदो रहेछ, तर भुइंमा झरेको फूललाई जस्ताको त्यस्तै बोटमा टास्न पनि आउँछ?”
केटाकेटीहरु अलमल्ल परे । उनीहरुले यस्तो कुरा सोचेकै थिएनन । उनीहरुलाई शिक्षकले भनेको कुरा अनौठो लाग्यो ।एकछिन सोचे पछि सबैले एकै स्वरमा शिक्षकलाई सोधे :
शिक्षकले फेबिकल लिएर आए । अनि भुइंमा झरेका फूलको एक छेउमा फेबिकल लगाए । अनि रुखको पातमा लगेर टासिदिए । यो खेल केटाकेटीहरुलाई गज्जब लाग्यो ।
अर्को दिनबाट उनीहरुले बोटको फूल टिप्न छोडे । बरु भुइंमा झरेका फूल टिप्दै रुखमा टास्दै गर्न थाले ।
बालबालिकाको स्वभाव प्राकृतिक रुपमै चंचल हुन्छ । उनीहरु कुनै ठाउँमा एकछिन चुप लागेर बस्न सक्दैनन् । कुनै न कुनै गतिविधिमा सामेल हुँदै गर्दा कहिले कहीं गलत काम पनि गर्न पुग्दछन । तर हामीलाई चित्त नबुझेको कुनै पनि कुरा रोक्न हामी उनीहरुलाई ठाडो निर्देशन दिने गर्दछौं । त्यस्तो काम नगर्न निषेध गर्ने गर्दछौं । तर हामी कहिले पनि उनीहरुलाई विकल्प दिने प्रयास गर्दैनौं ।
बालबालिका बगेको नदी जस्तै हुन्छन । नदीको प्राकृतिक बहाबलाई थुन्ने प्रयास गर्नु भयो भने केही पानी जम्छ तर तुरुन्तै अर्को बाटो बनेर नदि फेरि बग्न सुरु गर्छ । कोठाभित्र हल्ला गरिरहेको बच्चालाई हल्ला नगर्न निषेध गर्नु भयो भने अर्को कोठामा पुगेर चकचक गर्न थाल्छन । त्यहाँ पनि निषेध गर्नु भयो भने घरको छतमा पुगेर चंगा उडाउन वा टोलका साथीहरुसंग खेल्न सक्छन । त्यो पनि निषेध गर्नु भयो भने फेरि घरमा कार्टुन हेरेर बस्न सक्छन ।
निष्कर्ष: बिना कुनै विकल्प बालबालिकालाई उनीहरुले गर्दै गरेको काममा निषेध गर्नु भयो भने उनीहरुले हामीलाई टेर्दैनन, झन् अर्को बदमासी गर्न सक्छन । माथिको प्रसंगमा पहिले मानिसहरुले फूल नटिप्न भनेर गाली मात्र गरे तर शिक्षकले फूल टिप्न प्रयोग भइरहेको बालबालिकाको उर्जा र इच्छाशक्तिलाई झरेको फूल टास्ने कुरामा रुपान्तरण गरिदिए । त्यही उर्जा पहिले नराम्रो काममा प्रयोग भएको थियो, तर पछि राम्रो काममा रुपान्तरण भयो । यो रमाइलो र अनौठो विकल्प थियो, जुन बालबालिकाले मन पराइदिए ।
लेखक ईन्टरनेसनल ईन्स्टिच्युट अफ एजुकेसन एण्ड सोसियल रिसर्चका प्रबन्ध निर्देशक हुन ।
Previous article३० वर्षे सेवाहदका कारण प्रहरीका दर्जनौं अधिकृतको अवकाश
Next articleप्रदेश ३ का भौतिक योजना मन्त्री केशव स्थापित बर्खास्त
Yessamachar - मंसिर १९, २०७७ 0
काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले कोभिड–१९ ले सिर्जना गरेका विषम स्थितिमा शिक्षा पाउने बालबालिकाको अधिकारलाई ध्यान दिँदै सरकारका नीति तथा कार्यक्रमको प्रभावकारीरूपमा कार्यान्वयन गर्न...
ओलीलाई अष्टलक्ष्मीको प्रश्न– बैठक नमान्ने भए लिखित प्रत्युत्तर किन पेस गरेको ?
काठमाडौं । सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)की नेतृ अष्टलक्ष्मी शाक्यले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई बैठकमा उपस्थित भएर छलफलमा भाग लिन आग्रह गरेकी छन् ।...
दुई दिनमै रोकियो काठमाडौंको ‘एन्टिजेन’ परीक्षण
सरकारले काठमाडौं उपत्यकामा 'एन्टिजेन' परीक्षण तत्कालका लागि स्थगित गरेको छ।परीक्षण गर्न आउनेहरूको सहभागिता न्यून देखिएपछि हाललाई परीक्षण स्थगित गरिएको हो। सरकारले एन्टिजेन परीक्षण सोमबारदेखि सुरू...
काठमाडौं । उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगले तयार पारेको प्रतिवेदन सरकारले सार्वजनिक नगरेपछि आयोगका सदस्यहरुले आफैं सार्वजनिक गरेका छन् । आयोगले २०७५ सालमा सरकारलाई बुझाएको...
काठमाडौं । पार्टीका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‍प्रचण्डको द्वन्द्व मिलाउन नेकपाका नेताहरुले दौडधुप थालेका छन् । शुक्रबार बिहान उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल...